Man United Waxba Ciyaarta Kamay Qaban Si Ay U Guulaysato,Hadiyad Ayaanu U Bixinay-Ronaldo Oo Colaad Ka Abuurtay Jamaahiirtii United Ee Tobanka Sano Soo Taageerayay Isaga Oo Ka Maqan. – GOOL24.NET
Man United Waxba Ciyaarta Kamay Qaban Si Ay U Guulaysato,Hadiyad Ayaanu U Bixinay-Ronaldo Oo Colaad Ka Abuurtay Jamaahiirtii United Ee Tobanka Sano Soo Taageerayay Isaga Oo Ka Maqan.
Cristaino Ronaldo ayaa dareen aan fiicnayn ka bixiyay guuldaradii layaabka lahayd ee kooxdiisa Juventus xalay ka soo gaadhay Manchester United wuxuuna Ronaldo sameeyay ficilo badan oo uu furniin buuxaa ku dhex mari doono jamaahiirta kooxdiisii hore ee Manchester United.
Muddo toban sanadood ah oo uu Cristaino Ronaldo ka maqnaa Manchester United, wali waxa uu taageero aan kala joogsi lahayn uu ka helayay jamaahiirta kooxdiisii hore ee Red Devils ilaa intii laga soo gaadhaayay goolkii uu xalay ku dhaliyay Allianz Stadium iyo waliba hadalkii ka danbeeyay ciyaarta ee uu saxaafada ka sheegay.
Cristiano Ronaldo ayaa qaab waali ah ugu dabaal degay goolkii quruxda badnaa ee uu ka dhaliyay Man United isaga oo waliba astaan iyo tilmaamo xabadkiisa ama labaadiisa ah sameeyay wuxuuna dabaal dega goolkani waji gabax ku noqday kumanyaal taageerayaasha United ah oo ixtiraam badan u hayay Ronaldo.
Iyada oo markii horeba ay jamaahiirta United ka cadhaysnaayeen in Ronaldo aanu ixtiraamin kooxdiisii hore ee United waxa uu markale sheegay in Man United ayna ciyaartan waxba ka samayn si ay u guulaysato balse ay kooxdiisa Juventus iska raaxaysatay oo ay natiijada hadiyad ahaan u bixisay.
Dabaal degii uu Ronaldo sameeyay iyo falcelintii Jose Mourinho ee dhamaadkii ciyaarta ayaa sawiradooda laysku keenay si ay jamaahiirta kubbada cagtu ugu maadsato Ronaldo maadaama oo goolkiisii cajiibka ahaa iyo dabaal degiisii ay guul gaadhsiin waayeen Juventus.
Cristiano Ronaldo oo markii ay ciyaarto soo dhamaatay waraysi siiyay Sky Sports Italiya ayaa ka hadlay tartanka Champions league wuxuuna yidhi: “Champions league-gu waa tartan khaas ah halkaas oo aad ku guulaysan karto, laakiin ma raaxaysan kartid maadaama oo ay wax walba dhici karaan”.
Intaa kadib Ronaldo ayaa qiimayn ku sameeyay kulankii kooxdiisu guuldarada kala kulantay Man United wuxuuna sheegay erayo ayna marnaba jeclaysan doonin Jose Mourinho iyo jamaahiirtiisii hore ee Man United.
Ronaldo oo ka hadlaya kulankii Allianz Stadium ayaa yidhi: “90 kii daqiiqo ayaanu maamulnay ciyaarta, waxaanu helay fursado aad u badan, waxaanu dili karnay saddex ama afar jeer, laakiin waanu raaxaysanay oo la nagu ciqaabay. Manchester United waxba kamay qaban ciyaarta si ay u guulaysato, xataa nasiibka kama hadli kartid, sababtoo ah waxaa waajib ah in aad nasiibkaaga raadsato laakiin xalaadan hadiyad ayaanu iyaga u siinay”.
Ronaldo oo ka hadlaya waxa waqti xaadirkan la gudboon kooxdiisa Juventus ee kadib guuldaradii United ayaa yidhi: “Hadda waa in aanu sare u qaadno madaxayaga, maadaama oo aanu xaqiiqdii si fiican u ciyaarnay isla markaana aanu wali halka ugu saraysa kaga jirno groupka”.
Dhinaca kale Ronaldo ayaa ka hadlay goolkiisii cajiibka ahaa iyo falcelintii laga sameeyay gaar ahaan qolka labiska wuxuuna yidhi: “Qolka labiska ayaan ku arkay ku celiska, maan ogaan in uu ahaa gool fantastik ah, laakiin dhaqaaq fiican ayaan sameeyay, si xoogan ayaanan kubbada u laagay”.
Ronaldo ayaa farxad ka muujiyay goolkiisa balse waxa uu niyadjab yar ka muujiyay guuldarada kooxdiisa soo gaadhay wuxuuna yidhi: “Waan ku faraxsanaa goolka, laakiin dabcan waan yara niyadjabay sababtoo ah waxaa waajib nagu ahayd in aanu ciyaarta ku guulaysano saddex ama afar gool”.
Cristiano Ronaldo oo wali sii duraya Man United ayaa yidhi: “Manchester wax badan may samayn, waxay heleen laba fursadood oo kubbada saro ah, waan ogahay in kooxaha Ingiriisu ay markasta raadiyaan kubbadaha sare”.
Cristiano Ronaldo ayaa la waydiiyay ilaa inta ay kooxdiisa Juventus ku sii socon karto tartanka Champions League wuxuuna yidhi: “Waa xili aad u horaysa, waxaa waajib nagu ah in aanu talaabo-talaabo u qaadano, Guruubka ayaanu ugu saraynaa, koox fiican ayaanu nahay, laakiin waa dariiq dheer finalku. Dadkaas, kooxda.. waxay ku riyoonayaan ku guulaysiga Champions League, laakiin waxaa waajib nagu ah in aanu talaabo-talaabo u qaadano”.